यस्तो थियो २००८ सालमा आएको नेपालको पहिलो बजेट (पूर्ण विवरणसहित)
निशान न्युज जेष्ठ १५, 2079
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए  । आज उनै शर्माले अपराह्न ४ बजे संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गर्दैछन् ।
यो त तत्कालको विषय भयो । नेपालको पहिलो बजेट कस्तो थियो र कति आकारको थियो भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने र सोहीअनुसार वार्षिक खर्च गर्ने प्रचलन धेरै लामो भएको छैन । वि.स. २००८ सालदेखि सरकारले देशको आय÷व्ययको विवरण पेस गर्न सुरु गरेको हो ।
वि.स. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णसम्सेर जबराले नेपालको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेट नै नेपालको पहिलो सरकारी हिसाबकिताब सहितको पहिलो बजेट हो । त्यसयता, निरन्तर प्रत्येक वर्ष बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
बजेट वक्तव्यका अनुसार वि.सं. २००७ सालको कूल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार र खर्चतर्फ २ करोड ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ थियो । जसमा उक्त वर्ष ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत थियो ।
‘यसअघि, मुलुकको आम्दानी र खर्चको विषय कसैलाई जानकारी थिएन भन्ने कुरा तपाईंहरूलाई विदितै छ,’ पहिलो बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘अब त देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएकाले देशभर के–केमा खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी सरकारबाट पाउने हक छ ।’
‘प्रजातन्त्र अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाईंहरूको सामुन्ने पेस गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री जबराले भनेका थिए । उक्त बजेट वक्तव्यमा त्यसअघि देशको आय व्ययको खर्च राख्ने नगरेको र उपलब्ध बजेट तथ्याङ्क पनि ठीकठाक नभएको बताइएको थियो ।
नेप्से परिसूचक आज ८ अंकले घट्यो
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ८.८७ अंकले घटेर २ हजार २८ मा पुगेको छ । शुक्रबार कारोवा...
आज पनि सेयर बजारमा हरियाली, २ अर्ब ४५ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । बिहीबार पनि सेयर बजार उच्च अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचकले २ हजार अंक नाघेको छ । कुल ...
आज शेयर बजार नेप्से परिसूचक ४१.३९ अंकले बढ्यो
काठमाडौँ । आज शेयर बजार बढेको छ । आज शेयर बजार नेप्से परिसूचक ४१.३९ अंकले बढेर १ हजार ९ सय ६२ दश...
वर्षाले हवाई उडान प्रभावित, धेरै उडान रद्द
काठमाडौं। लगातार परेको पानी नरोकिएपछि विहान ६ बजेदेखि हुने उडान रोकिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्...
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालले अहिले दैनिक १० देखि १२ करोड रु...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।सरकारले पेट्रोल...